Wasaaradda Ganacsiga Ayaa Soo Bandhigtay Warbixin Ku Saabsan Talaabooyinka Laga Qaado Dekadda Çeşme | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirWasaaradda Ganacsiga Ayaa Soo Bandhigtay Bayaan Ku Saabsan Tallaabooyinka Dekadda Çeşme
24 / 03 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, TURKEY
Wasaaradda ganacsiga ayaa caddeysay cutubyo ka kooban dekeda
Bayaanka ay soo saartay Wasaaradda Ganacsiga, waxaa lasiiyay macluumaadka soo socda: Bayaanka soosocda waxaa soo saaray Wasaaradeena markii ay sheegatay warbaahinta qaar iyo qeybaha warbaahinta ee la xiriira howlaha kastamka ee Dekadda Çeşme.
Sida la ogsoon yahay, in kasta oo coronavirus (COVID-19), ganacsigu wuxuu ku sii socdaa waddankeenna iyo adduunka oo dhan. Marka la eego baaxadda tallaabooyinka laga qaaday cudurka 'coronavirus', Wasaaradda Ganacsiga waxay si sax ah ula shaqeyneysay caadooyinkayaga ilaa maalinta ugu horeysa.
Macnaha guud, irridda Iiraan iyo Ciraaq ayaa la xiray markii ugu horreysay waxaana la qaaday tallaabooyin ilaalin ah dhammaan caadooyinka. Maaskarada, galoofyada iyo jeermis-dileyaasha waxaa lasiiyay 31.01.2020 Waaxda Kastammada ee Çeşme, taasoo ah mowduuca sheegashada, nidaamyada kastamkuna ay sii wadayaan iyagoo qaadaya tallaabooyin difaac adag.
3 markab ayaa safarro joogto ah ku taga Agaasinka kastamka ee oneşme Axadda, Talaadada iyo Jimcaha inta u dhaxaysa Cesme - Italy / Trieste. Laga soo bilaabo 28.02.2020, rakaabkii iyo galitaankii wadayaasha ayaa la joojiyay, maraakiibta soo gala ma qaadaan rakaabka iyo wadayaasha. Shaqaalaha markabka ayaa si adag looma ogola inay galaan / ka baxaan markabka ayna la xiriiraan dadka ka shaqeeya dhulka, maraakiibta iyo gawaarida ayaa la kala diraa.
Markabka markabka la xirayo, daboolka ayaa la nadiifiyaa, maaskaro difaac ah iyo xamuul qaamuuska qaaska ah ayaa lagu qaadayaa taxadarka nooc kasta leh, dhammaan taatikada ka tagaya markabka waa la jeermiyaa. Markab markabku faaruqiyo, rarida waxaa lagu bilaabay markale.
Haddii wadayaasha doonaya inay galaan aagga dekeddu ku xiran yihiin ay kaxaystaan ​​tareennada markabka keena, inay 14 maalmood gudahood dalkeenna uga soo galaan dibedda waxaa wax laga weydiinayaa xog-hayaha guud ee Amniga iyo kuwa ku habboon ee loo qaadayaa dekedda. Daraasadda lagu sameeyay nidaamka, nidaamyada waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu ogeysiinayo hay'adda karantiil ee ku saabsan kuwa loo arko inaysan ku habooneyn codsigana si sax ah ayaa loo raacaa.
Dhanka kale, nabadgelyada maamulka dekada, cabirida dabka maalinlaha ah ee dhamaan shaqaalaha garoonka soo gala dekada ayaa sidoo kale la sameeyaa.
Markabka U15 RO-RO, oo ah mowduuca sheegashada, ayaa ka dhoofay dekedaha magaalada Trieste ee dalka Talyaaniga 17.03.2020, wuxuuna u dhowaaday dekeda Çeşme 20.03.2020 saacaddu markay ahayd 17.00. Kahor markabku dekeda, dekedaha iyo daboolida markababa dhammaantood waa la jabiyey si jeermiska looga nadiifiyo. Ma jirin rakaab iyo darawalkii la socday markabka, shaqaalahana looma ogolaan inay soo degaan. Tareenada oo leh xayndaab xidhan oo kaamirooyinka kaxayn doona ayaa sidoo kale lagu buufiyay; Maaskaro, galoofis iyo tallaabooyin kale oo ilaalin ah ayaa lagu dabaqay si taxaddar leh shaqaalaha ku hawlan muddada hawlgalka. Taargoon walba iyo gaari walba oo la soo tuuray si gaar ah ayaa loogu buufiyay. Kadib markab xamuul ah, markabku si buuxda ayuu u istaagay oo waxaa loo raray dekeda Trieste subaxnimadii 21.03.2020 saacadu markay ahayd 06.15.
Cesme Customs Agaasinka, dab markab at 17.03.2020 Taariikhda ka hor dekedda berthing ogaado 4 shaqaalaha, Wasaaradda Caafimaadka, Turkiga Border iyo Caafimaadka Guud ee Coast Agaasinka loo gudbiyay isha Xeebta Caafimaadka Xarunta Inspection ee isbitaalka, fayraska ayaa lagu tilmaamay inay ku jiraan shaqaalaha aan 19.03.2020 taariikhda oo sabab u ah imtixaanka. Tijaabooyinka ugu horreeyay ee 3-da shaqaalaha kale waxay ahaayeen diidmo, iyo tijaabadii labaad ee la sameeyay intii lagu guda jiray howsha dabagalka isbitaalku waxay ahayd mid xun, waxaana loosoo saaray si ay u siiyaan go'doominta guriga. Waxaa la go'aamiyay in lagu karantiilo 45 qof oo xiriir dhow la leh shaqaalaheena la tijaabiyay.
Marxaladaha oo dhan, talaabooyinka ayaa la qaadayaa iyada oo la raacayo tilmaamaha iyo macluumaadka Agaasinka Caafimaadka Dadweynaha, shaqooyin cusub ayaa laga sameeyay maamulada kastamyada kaladuwan ee laga soo qaaday gobolka, waxaana la qaaday dhamaan talaabooyin iyo tilaabooyin lagu hubinayo inaysan wax carqaladeyn howlaha howlgalka kastamka.
Sidaas darteed, iyadoo dhammaan taxaddarrada ay dowladdeenna ka qaaddo ilaalinta caafimaadka dadkayaga iyo shaqaalaha kastamka, kuwaas oo ah ahmiyadeena koowaad, ayaa la dabaqaa iyada oo aan dib loo dhigin, dhanka kale howlahayagu waxay sii wadaan sii wadida ganacsiga iyada oo aan la carqaladeyn caadooyinkayaga, taas oo ahmiyad weyn u leh hubinta joogtaynta silsiladda sahayda.
Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri Ukome
Waxyaabaha muhiimka ah ee ku saabsan dhibaatooyinka gaadiidka ee İzmir
Sharaxaadda TCDD ee Isugeynta Heerka